Naanị onye nnọchi anya German nọ na China nwụrụ na mberede: nyocha
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany » Naanị onye nnọchi anya German nọ na China nwụrụ na mberede: nyocha
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Safety • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
A wasụrụ ya iyi dị ka onye nnọchi anya German kacha ọhụrụ na August 24, makwaara dị ka aka nri na Chancellor German Merkel. Gịnị mere o ji nwụọ taa? Ndị ọchịchị German gbachiri nkịtị banyere ọnọdụ ndị ahụ, n'ihi nyocha na -echere.
Jan Hecker, onye nnọchi anya German ọhụrụ na China nwụrụ n'ụtụtụ Mọnde na Beijing
Edebere ọnọdụ nke mbibi ya dị ka ihe nzuzo ruo ugbu a, ndị ozi ala ọzọ nke German na -enyocha ya
A họpụtara Ambassador Hecker n'August 24, hapụ nwunye ya na ụmụ ya atọ mgbe ọ nwụrụ taa ọ dị afọ 54.
naanị nọrọ na ọrụ onye nnọchi anya ụbọchị ole na ole. Onye dị afọ 54 rụrụ ọrụ mbụ dị ka onye ndụmọdụ amụma mba ofesi nye Onye isi ala German Angela Merkel.
A họpụtara onye nnọchi anya Hecker na njedebe nke August. Ọ dị afọ iri ise na anọ wee hapụ nwunye ya na ụmụ atọ.
Onye nnọchi anya onye nnọchi anya German na China bụ otu n'ime ndị kacha nwee ntụkwasị obi na ndị ndụmọdụ nchekwa obodo maka ịpụ na Chancellor German Angela Merkel.
Naanị ụbọchị ole na ole gara aga, a hụrụ ya ka ọ na -egosi ịdị n'otu na onye ọrụ ibe ya Lithuania.
"Ọ bụ nnukwu ihe nwute na nkụda mmụọ ka anyị nụrụ maka ọnwụ mberede nke onye nnọchi anya German na China," Minista mba ofesi German kwuru na nkwupụta na Mọnde.
"Echiche anyị ugbu a dị na ezinụlọ ya na ndị nọ ya nso."
Ọfịs Ofesi nke Germany ekpughere ihe kpatara ọnwụ onye nnọchi anya mba ahụ.
Maazị Hecker rụrụ ọrụ dịka onye ọka iwu na onye ọka ikpe na mbụ.
O zutere Onye isi ala US Biden na Chancellor Merkel na G7.
Hecker yiri “Obi dị m mma” n'oge ihe omume ọ kwadoro n'ụlọ ya na Beijing na Fraịde gara aga, otu n'ime ndị ọbịa ahụ gwara ụlọ ọrụ mgbasa ozi Reuters.
Mgbe ha na-ewebata onye nnọchi anya ha nke 14 na China, ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ German kwuru na ebumnuche ya ga-abụ ịhụ "mmepe ogologo oge na nkwụsi ike nke mmekọrịta Germany na China… maka ọdịmma ndị obodo abụọ ahụ."
Ọ boro ebubo ịlaghachi azụ na Germany wee gaa n'ihu soro onye isi ala na -arụ ọrụ ruo na njedebe nke oge ya. Agbanyeghị, n'ihi "ọnọdụ ndọrọndọrọ ọchịchị" siri ike n'oge na -adịbeghị anya, ikekwe metụtara ndị Taliban weghaara Afghanistan, gọọmentị etiti kpebiri na "ụlọ ọrụ nnọchi anya German dị na Beijing ga -agba mbọ hụ na ọ dị oke mma. Germany nyere ya iwu ka ọ nọrọ na Beijing.